भ्रष्टाचार प्रवर्द्धन शिक्षा - व्यंग्य - प्रकाशितः वैशाख १३, २०७६ - नेपाल
यस वर्षको एसईई सकियो । धेरै कलेजले विद्यार्थी तान्न अनेक विज्ञापन-पर्चा बाँडे । सञ्चार माध्यममा प्रचारप्रसार गरे । विद्यार्थीलाई डाक्टर, इन्जिनियर, एकाउन्टेन्ट, पाइलट, प्रशासक बन्न वा विदेश गएर राम्रा काम पाउन सकिने आश्वासन दिँदै आकर्षण गरे । तर कसैले पनि समसामयिक, देशको हावापानी सुहाउँदो, सजिलो र उच्च आयआर्जन हुने पढाइबारे जानकारी दिएनन् । वास्तवमा त्यस्ता खाले स्कुल/कलेज देशमा खुलेकै रहेनछन् । नयाँ व्यापार सुरु गर्न इच्छुक उद्यमीका लागि यो क्षेत्र खुला रहेछ ।
पढाइमा 'डी', 'ई', 'एफ' वा 'जी' जुनसुकै ग्रेड आओस्, विद्यार्थीले पढ्न पाउनुपर्छ । त्यस्ता विद्यार्थीलाई पुराना पद्धतिमा चलिरहेका कलेजले त भर्ना लिँदैनन् । अतः त्यस्ता विद्यार्थीको पढ्न र भविष्यमा गरिखान पाउने अधिकार रक्षाका लागि बेग्लै र विशेष पढाइ हुने खास नेपाली कलेज वा विश्वविद्यालय खोल्न जरुरी भइसकेको छ । त्यस्ता कलेजले विद्यार्थीलाई विदेश पलायन हुनबाट रोकेर देशभित्रै हावामा उडिरहेको पैसा बटुल्न सिकाउनेछन् ।
त्यस्ता कलेजमा भर्ना हुन पढाइमा गोबरगणेश भए पनि स्वभाव र व्यवहारमा चलाख, वाक्पटु, निर्लज्ज, निडर र कुटिल स्वभावका विद्यार्थीले मात्र मौका पाउनेछन् । त्यस्ता विशेष क्षमताका विद्यार्थीको स्वर्गजस्तो भविष्य यही देशमा छ । तिनीहरुलाई सही बाटो देखाउन नै यस्ता विश्वविद्यालय वा कलेजको आवश्यकता परेको हो । यो क्षेत्रमा आँखा चिम्लेर लगानी गरे पनि सजिलै र छिट्टै नै अथाह आम्दानी गर्न सकिने निश्चित छ ।
त्यस्ता विश्वविद्यालयले कुनै लिखित पाठ्यक्रम बनाइराख्नुपर्ने छैन । विद्यार्थीलाई व्यावहारिक शिक्षा मात्र दिए पुग्छ । जस्तै, ढाँट्न, छल्न, ठग्न, सपना देखाउन, हावामा महल बनाउन, मानिसलाई आफ्ना पछि लगाउन कसरी सकिन्छ ? मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सचिव, नेता, उच्च प्रहरी, सैनिकलगायत सत्ताधारीका बेडरुमसम्म कसरी पुग्ने ? घुस्याहा कर्मचारी, लोभी नेता, आत्मघाती आयुक्त, किरन्टोकी न्यायाधीशहरुको पहिचान कसरी गर्ने, तिनीहरुको सेटिङ कसरी मिलाउने ? स्कुल, कलेज, अस्पतालजस्ता संवेदनशील क्षेत्रलाई कसरी पैसा छाप्ने कारखाना बनाउने ? नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहका उच्च अधिकारीलाई कसरी नोटका बिटाले हानेर लाचार बनाउने ? यस्ता सबै प्रश्नका व्यावहारिक ज्ञान यस्ता कलेजले दिनेछन् । भ्रष्टाचारको साम्राज्यमा एक इमानदार भ्रष्टाचारी व्यक्तित्व निर्माण गरी समृद्ध मुलुक बनाउनमा यस्ता कलेजले सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्नेछन् ।
यस प्रकारको शिक्षा दिने स्कुल/कलेज वा विश्वविद्यालयको आवश्यकता झन्-झन् टड्कारो हुँदै गएको छ । किनभने भ्रष्टाचारलाई रोक्नुपर्ने निकायका अधिकारी नै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायभित्रै भीमकाय भ्रष्टहरुको जन्म हुने, सबैभन्दा इमानदार ठानिएका राजनीतिक दलका कतिपय नेताहरु नै भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त भएको भेटिने क्रम झन्-झन् बढ्दै गएकाबाट स्पष्ट हुन्छ, देशबाट भ्रष्टाचार जाँदैन, अझै बढ्छ । त्यसैले बरु अब सरकारले भ्रष्टाचारलाई मान्यता दिई यस क्षेत्रमा लगानी वातावरण सहज बनाइदिनुपर्छ । वेश्यावृत्ति, गाँजा व्यापार, तस्करी आदिलाई कानुनी मान्यता दिएर कति मुलुक समृद्ध भइसके । हामी पनि हाम्रो प्रवृत्ति सुहाउँदो भ्रष्टाचार कर्मलाई प्र्रोत्साहन र मान्यता दिएर करको दायरामा ल्याई मुलुकलाई समृद्ध बनाउनतिर लागौँ । विद्यालय तहबाटै भ्रष्टाचार प्रवर्द्धन शिक्षा लागू गरौँ । यसबाट मात्रै हाम्रो सरकार, राजनीतिक दल, नेता र जनता सबैको कल्याण हुनेछ ।
प्रकाशित: वैशाख १३, २०७६
तिनै ओली चाहिन्छ